Askar Faransiis ah oo la baarayo kaddib tacadi ay u geysteen nin u dhashay Nigeria - BBC News Somali
Askar Faransiis ah oo la baarayo kaddib tacadi ay u geysteen nin u dhashay Nigeria
Askar Faransiis ah oo howlgal ku jiro
Xeer ilaalinta magalaada Turin ee ku taallo dalka Talyaaniga ayaa bilaawday baaritaan kaddib markii askari ka tirsan waaxda canshuuraha dalka Farnsiiska oo hubeeysnaa uu si qasab ah nin uga qaaday tijaabo daroogada ah isagoo ku sugan xarun qaxooti oo ku taalo Talyaaniga.
Arrintaan ayaa waxa ay sababtay xiisad diblumaasiyadeed oo ka dhex qaraxda labada dal. Waxaa lagu eedeyay in ay ku xadgudbeen xafiiskooda.
Waa dhacdo nin siyaasi ah oo Talyaani ah uu kaga cabanayo in Faransiisku uu ula dhaqmay Talyaaniga sidii suuli loogu talagalay dadka qaxootiga ah.
Shan sargaal oo Faransiis ah oo kuwa joogo kastamyada ah ayaa baarayey Jimcadii rakaab saarnaa Tareen u kala gooshayey magaalooyinka Paris iyo Milan.
Saraakiishaan ayaa si addoonsi ah ula dhaqmayey nin qaxooti ah oo u dhashay Nigeria ah kaasi oo ay uga shakiyeen in uu dhoofinayey daroogo uu jirkiisa ku qariyey
Waxa ay u ka xeeyeen xarun dadka muhaajiriinta ah ku leeyihiin barta lagu magacaabo Bardonecchia, oo ah goob baraf miiran ah oo ku taal xuduuda Talyaaniga, waxayna saraakiishan Faransiiska ah ay ninkaas qaxootiga ah ee ku khasbeen in uu cabbo kaadi.
Kooxda lagu magacaabo Rainbow for Africa ee gacanta ku haysa xaruntaan ayaa waxa ay ku tilmaantay in ay tahay arrin silloon, waxa ay kooxdu sheegaysaa in lagu xad gudbay xuquuqdiisa, shaqaalahooduna ay cabsi galiyeen.
Wasiirka arrimaha dibadda Talyaanig ayaa codsaday in sharraxaad dheeri ah laga bixyio dhacdadaan.
Maxaad ka taqaannaa xanuun baab'iyaha loo adeegsado in masaska lagu dilo?
‘Heesteyda ay Soomaalidu ugu jecel yihiin waxaa muusigeeda ii tumay ilmahayga aabahood’
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: 17 Maajo 2019
Maxaad ka taqaanaa shantii Golaha Sare ee dowladdii kacaanka?